Cunto Dabiici ah Cunto iyo cabitaan Bogagga rinjiga bilaash ah ee loogu talagalay
Cunto Dabiici ah Cuntada iyo cabitaanka
Cuntada dabaasha waxaa laga iibsan karaa dukaanka cuntada ama dukaanka cuntada
Dhibaatooyin dheef-shiid kiimikaad badan iyo xajintooda waxay calaamad u yihiin habka casriga ah ee nolosha. Kuwa raba inay ka fogaadaan, u fiirso jimicsi ku filan, waqti nasasho iyo raashin isku dheeli tiran, hubaal ahaan iyada oo loo marayo cunto dabiici ah.
Cunto dabiiciga ah iyo doorkeeda nafaqada
Xaaladda dambe, cuntooyinka dabiiciga ah ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara. Waxay siiyaan jirka oo leh vitamiin, macdan iyo waxyaabo muhiim ah oo aan awoodin ama qayb ahaan u soo saari karin.
Cuntada dabiiciga ah waxay dhadhamisaa labo jeer dhadhan fiican
Kuwani, marka loo eego, waxay isu dheellitiraan iskudhicinta jirka oo ay keento cadaadiska, cadaadiska jidhka iyo maskaxda ama jimicsi la'aanta, iyo in ay gacan ka geystaan ​​hirgelinta unugyada shaqeynaya waqti dheer.
Waxyaabaha kale, daraasado saynis oo kala duwan oo ku saabsan sababaha horumarinta osteoarthritis waxay cadeynayaan in xulashada la beegsanayo tayada sare ee tayada dabiiciga ah loo isticmaalo si looga hortago.
Cuntooyinka dabiiciga ah waxay noqon karaan waxyaabaha ay ka kooban tahay beeraha dabiiciga ah. Ereyga cuntooyinka dabiiciga ah waxaa ilaaliya sharciyada gudaha Midowga Yurub.
Waxyaabaha dabiiciga ah looma daaweyn karo sunta cayayaanka, Bacriminta macmalka ah ama qashinka wasakhda ah ee aan la hodannin. Bacriminta iyo xakamaynta cayayaanka ayaa si gaar ah loo fuliyaa by habka noolaha, tusaale ahaan maro.
Cuntada xayawaanka, oo laga yaabo inay ku jirto ereyga cuntada, xeerarka ku filan ayaa lagu dabaqayaa. Tani waxay u baahan tahay samafal ah xayawaanka, kaas oo lagu maamulo Xeerka Aasaasiga ee 2007. Antibiyootigyada waa in aan loo isticmaalin si looga hortago, laakiin keli keli keli ah. Diyaarinta raashinka waxaa lagu bixiyaa shucaaca laftirka. Waxyaabaha kale ee lagu daro sida maaddooyinka iyo maaddooyinka wax lagu ilaaliyo waxaa si dhib leh loo isticmaalaa wax soo saarka.
Yaa doonaya inuu soo iibsado cunto dabiici ah, wuxuu doortaa alaabooyinka lagu calaamadeeyay bio-seal. Tan waxaa lagu soo bandhigay Germany sanadka 2001. Waxay dammaanad qaadeysaa asalka ecological ee maaddooyinka.
Intaa waxaa dheer, in badan oo beeralay ah oo dabiici ah ayaa si toos ah u iibiya dukaanka gudaha. Qaar ka mid ah waxay sidoo kale iibiyaan alaabtooda iyagoo isticmaalaya internetka, iyagoo siinaya dukaamada gobolka, makhaayadaha ama macaamiisha dhammaadka.
Cunto jidhka u ah caafimaadkaaga
Cuntada loo bixiyay cuntada sida dabiiciga ah loogama baahna inay noqoto cunto dabiici ah iyada oo soo-saaraha uusan u baahnayn inuu buuxiyo shuruudaha xeer-ilaalinta Beerta Xoolaha. Si kastaba ha ahaatee, bixiyeyaasha waxay u badan tahay inay xiiseynayaan heerarka tayada sare leh.
Shirkadaha yaryar ee soo saara alaabooyinka bayoolojiga ah ayaa inta badan ku bixiya calaamadda jimicsiga sababtoo ah qadarka badeecada iyo kharashka codsigu wuxuu noqonayaa saamiga. Beereyaal badan oo hiwaayad ah ayaa sidoo kale xiisaynaya miro iyo qudaarta qudaarta.
Si kastaba ha ahaatee, ecology ma aha oo kaliya la xidhiidha tayada alaabooyinka, laakiin sidoo kale si loo sii wado. Meelaha dabiiciga ahi waxay ka faa'iideysanayaan wax soo saarka deegaanka. In beerista caadiga ah, Bacriminta macmiilka ku dhowaad loo isticmaalo, taas oo si weyn u kordhin lahaa dhalidda ee miraha.
Si kastaba ha noqotee, way ka badan tahay, in ka badan sanado badan oo dhiig-miirashada la isticmaalo. Carrabku way ka soo baxaan, waxay ku adag yihiin wax kasta oo nafaqooyin muhiim u ah microclimate caafimaad iyo bixinta dhirta. Gaar ahaan, magnesiumka macdanta ayaa lumay iyaga. Laakiin aad bacrimiso badan oo ka badan potassium.
PH ayaa ka baxa dheelitirka. Mararka qaarkood nolol caynkan oo kale ah suurtagal ma ahan. In beeraha organic, dhinaca kale, aad fiiro si isku dheelitiran u dhexeeya nafaqooyinka. Haddii ay lagama maarmaan noqoto, dib-u-bacrimiyo. Wax-soo-saarku badanaa wuu ka hooseeyaa beerashada caadiga ah. Dhismayaasha waxaa loo isticmaali karaa sanado badan.
Marka ay timaado sii jiritaan, qiimaha gaadiidka ee cuntada ayaa sidoo kale door muhiim ah ka ciyaara. Kuwa iibsanaya badeecadahooda waxay ka qayb qaataan ilaalinta deegaanka. Intaa waxaa dheer, waxaad awoodi doontaa inaad iibsato khudradda xilliga caadiga ah ee beeralayda dabiiciga ah ee ku xeeran geeska.
Kuwani waxay si buuxda u hodan yihiin goosashada, halka cuntooyinka caadiga ah inta badan la goosto waqti hore si ay u noolaadaan safar dheer oo safar dheer ah. Waxyaabaha nafaqo leh ee cuntooyinka dabiiciga ah ee gobolka ka yimaada waa inay ahaadaan kuwo badan oo ka sarreeya alaabta qalaad.
Soosaarka cuntada caadiga ah waa ka raqiisan yahay waqti yarna waa la qaataa marka loo eego beeraha dabiiciga ah iyo daryeelka xoolaha. Tani waa la muujin karaa, lafdhabarta, habdhaqanka lo'da xoolaha. Haddii aan la isticmaalin kahortaga antibiyootikada, wadarta lumitaanka cudurku way dhici kartaa.
Cunto dabiici ah
Kuwa ka soo horjeeda isticmaalka hoormoonka korriinka waa in ay marmarsiiyaan xoolaha muddo dheer. Marka daaweynta dabiiciga ah loo isticmaalo in lagu daweeyo cudurrada, waxay badanaa qaadataa waqti dheer si ay u shaqeyso. Ugu dambeyntii, waxsoosaarkooda ugu sarreeya lagama heli karo ciidda qallalan ee hawada ku jira. Dhamaan waxyaabahan oo dhan waxay saameeyaan qiimaha cuntooyinka dabiiciga ah.
Cuntada dabiiciga ah waa inay noqotaa mid qaali ah marka la barbar dhigo alaabada caadiga ah, si beeraleedka dabiicigu u noqon karo dhaqaale ahaan. Inkastoo macaamiil badani ay hadda fiirinayaan asalka cuntada, badankoodu waxay door bidaan qiimaha jaban.
Kiisaska ugu yar waxa laga helaa dhaqaalaha iibsashada jaban. Taas bedelkeeda, waa xulashada aan macquul ahayn ee alaabooyinka ay ku imaan karto marka hore. Tani ma aha oo kaliya saameyn taban oo ku saabsan jiritaanka beeraleyda. Sidoo kale caafimaadka shakhsiga iyo dabiicigu waa xanuun. Waxay u egtahay qof waliba inuu si firfircoon uga qaybqaato fayoobka naftiisa iyo in uu gacan ka geysto sii waarida adduunka.
Ku kaydi cuntada si habboon | Cuntada iyo cabitaanka
Fondue | Cunista iyo cabitaanka saaxiibadaa
Feuerzangenbowle Recipe | Cuntada iyo cabitaanka
Raclette | Cuntada iyo cabitaanka
Pasta Salad Recipe | Cuntada iyo cabitaanka
Cunnada cuntada Cuntada iyo cabitaanka
Salad baradho ah Cunto iyo cabitaan
Rinjiyeynta bogagga cuntada iyo cabitaanka
Bogagga cabbista cabbitaanka qaxwaha | cunin
Bogsiinta midabaynta khamriga | cunin
Xilliga xagaaga Cabitaanka Nafaqada